Qurxinta ragga: daaweynta guriga ee wajiga ninka | Ragga Stylish
Mar dambe dhif iyo naadir maaha in la arko marwooyin aad u lab ah diyaarinta waji si loo hagaajiyo muuqaalka wajigaaga. Marka waxaa la joogaa waqtigii la baran lahaa daawooyinka guriga qaarkood ee loogu talagalay wajigaaga.
Sida dumarka oo kale, waxaa jira iskudhaf dhammaan noocyada maqaarka iyo dhibaatooyinka: maqaar dufan leh, fin, fiiq, qalalan, iwm Dabcan, wax waliba waxay ku xirnaan doonaan astaamaha gaarka ah ee nin walba.
1 Maaskaro Avokado ah
2 Qajaar iyo tufaax cas oo isku dhafan
4 Daweynta guriga ee wajiga: xoqin hazelnut
Maaskaro Avokado ah
Shaqadeeda ugu weyni waa quudinta maqaarka qalalan. Asal ahaan waxaad ubaahantahay waa avocado iyo qaado yar oo saliid saytuun ah. Waxa ugu muhiimsani waa in la isku daro labada maaddadood illaa ay ka samaysmaan isku dhejis isku mid ah. Kadibna waxaan u ogolaanay inay wax ka qabato 15 daqiiqo oo aan si fiican u mayrno
Qajaar iyo tufaax cas oo isku dhafan
Si ka duwan tan hore, midkani wuxuu u heellan yahay maqaarka dufanka leh. Si loo diyaariyo xalka, waxaan ku biireynaa nus qajaar iyo badh casaan cas. Labada miro waa in la jajabiyaa si hadhow loogu daro ukun cad iyo liin dhanaan yar. Markaad wax walba ku biireyso, waxaan dul saarnaa wajiga ugu badnaan 10 daqiiqo ka dibna waxaan ku saarnaa biyo diirran.
Tani waa mid ka mid ah daaweynta guriga ugu fiican ee wejiga labka. Waxaan kaliya ubaahanahay 3 qaado oo caano fadhi ah, labo sonkor ah iyo liin dhanaan yar. Isku darka iyaga ayaa sameyn doona koollo aan wajiga mari doonno; Marka ugu horreysa waan duugi doonnaa oo u oggolaan doonaa inay nasato 5 daqiiqo. Sida aan arki karno, tani waa nooc ka mid ah xoqida guryaha lagu sameeyo.
Daweynta guriga ee wajiga: xoqin hazelnut
Kaliya waa nala leeyahay raadso jajab jilicsan, oo leh malab yar iyo liin dhanaan. Waxaan u oggolaan doonnaa diyaarintaan inay wax ka qabato 20 daqiiqo bilowgeedana waxaan ku duugi doonnaa qaab wareegsan. Tan waxaa lagu dhaqi karaa biyo qabow.
Taabuugyadu waa inay ahaadaan kuwii hore: bulshada maanta jirta waxay ubaahantahay ragga ka walwalsan daryeelkooda bilicsanaanta.
Ilaha sawirka: Kambid.es / blog YouTube
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Is-qurxinta » Daaweynta guriga wajiga nin qarnigii XNUMXaad
Waxyoon loogu talagalay in lagu daro dhididka dharka daboolan ee ururinta dayrta 2018